Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Warbaahinta Xaajo oo wareysi la yeelatay madaxa xafiiska Xiriirka Qurba joogta DDS
Warbaahinta Xaajo oo wareysi la yeelatay madaxa xafiiska Xiriirka Qurba joogta DDS
July 31, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
XOL:Waxaa markii ugu horeysey warbaahinta Xaajo usuuro gashay inaan wareysi dheer la yeelano madaxa xafiiska Qurba Joogta DDS Mudane Cabdi Maxamed Gamaaddiid anagoo wax ka weydiiney waxqabadka xafiiska Qurba Joogta iyo hadii ay jiraan talooyin iyo tusaalooyin xafiiskani u hayo qurba joogta deegaanka ee dalkooda jecel. Wareysiga oo ah qoraal ayaa ku bilaabanaya sidatan:
XOL: Ramadaan Kariim kusoo dhawoow warbaahinta Xaajo.
Jawaab Ramadaan kariim waadna mahadsan tihiin fursadda qaaliga ah ee aad isiiseen:
XOL: – Waxaad nooga warantaa Xafiiskan waxyabaahii u qabsoomay intii lagu magacaabay?
Jawaab: Xafiiska xidhiidhka qurbajoogta dawlada deegaanka soomaalida waa xafiis ka mid ah xafiisyada dawlada deegaanka soomaalida itoobiya waana xafiis u adeega qurbajoogta u dhalatey deegaanka soomaalida una fududeeya hawlohooda guud iyo tooda gaarka ahba.Xafiisku waxuu xarantiisu waa caasimada dawlada deegaanka soomaalida itooboya magaalada jigjiga waxuuna laan ku leeyahay magaalada caasimada ah ee addis ababa. Anigoon aan soo koobi karin waxyaabihii qabsoomey haddana waxaan kusoo koobayaa
B-waxaa qabsoomey waxaa meesha ka baxdey kala qobqobnaantii iyo kala xidhnaatii u dhaxaysay qurbajoogta iyo shacabka dawlada deegaanka soomaalida iyoobiya waxaana jabiney darbigii waynaa ee u dhaxeeyay qurbajoogta iyo shacabka deegaanka soomaalida waxaa abuurmey isfahan iyo isla tashi ka dhaxeeya qurbajoogta, shacabka, iyo xukuumada.
T- Waxaan qabaney shirar waawayn oo taariikhi ah waxuuna qurbajoogta ku booqanay kulana soo tashanay todobada qaaradood meelihii ugu mihiimsanaaaa waxaana ka gaadhney guul dhaxal gal ah.
J- waxaan samayney jaaliyado adag oo ka jira wadamada intooda badan inta hadhayna waan dhamaystiri doonaaa.
X-Waxaan wadanka keenay maalgaliyayaal qurbajoog ah deegaankana u dhashay hadana kawada maalgashi balaadhan. waxaan soo kasbaney qurbajoogtii hada ka hor nabaddiidka taageeri jirtey hadana ka qayb qaadana hurumarka iyo nabadgalyada.
KH- Waxaan soo kasbaney qurbajoogtii hada ka hor maalgalin jirtey wadamo shisheeye aadi jirayna iyaga iyo ciyaalkooduba wakhtiyada fasaxa ama summerka wadamada carabta kenya iyo soomaaliya hada waxay ku suganyihiin deegaankii ay u dhasheen.
XOL: – Imisa ruux ayaa ka hawlgasha xafiiskan mase jiraan wax qurba joog ah oo laga shaqaaleysiiyey xafiiskan?
Jawaab: waxaa xafiiskan ka hawlgala 21 shaqaale 3 sedex ka mid ahna waa qurbajoog.
XOL: – Waxaa dhawaan saxaafadda kusoo baxay in xafiiskaagu shaaciyey in la sahlay qaadashada Kaarka Ethiopianimada haddana waxaa nasoo gaadhaya cabashooyin Qurba Joog deegaanka ah oo Jijiga kusugan ay ka cabanayaan dhanka saxiixyada qaarkood iney adagyihiin oo ay muddo ku qaadato, qaarkoodna ay bilo ka dhacsanyihiin Viisooyinkii, arintaas maxaa ka jira?
Jawaab:Hada aad iyo aad ayaan u fududayney waxuuna qurbajoogta deegaanka u dhalatey ku heli karaan yellow cardka ama ethiopian origin deganaashaha mudo 24 saac gudahood .Waxaana mar labaad balan qaadaynaa in ay mudadaas ku heli karaan.
XOL: - Madaxweynaha DDS waxuu dhawr jeer shaaciyay socdaaladiisii dibadda uu ku tagay in qurba joogtu xafiis weyn oo miisaaniyad badan yeelan doonto, arintaasi maxaa ka qabsoomay?
Jawaab: Arintaas madaxwaynuhu shaaciyay 100% way qabsoontey waxaan leenahay xafiis wayn logistic nagu filan iyo miisaaniyad badan.
XOL: Qurba joog badan oo Jijiga nagala soo xiriirey way ku qanacsan yihiin xafiiskaaga iyagoo sheega iney markey doonaan ku arkaan, balse xafiisyada qaar aysan sidaas ahayn, marka maxaa laga saacidi karaa Qurba joogta si ay xafiisyada kala duwan danahooda uga qunsadaan?
Jawaab:Waxaan ku saacidi karnaa si ay danahoodu ugu fududaadaan waa in ay soo maraan xafiiska qurbajoogta DDS xafiiskani waa buunadii u dhexeeysay xafiisyada iyo qurbajoogta.
XOL: – Qurba Joogtu maalgashi badan ayay ka sameeyanayaan deegaanka waxbadanna waxay ka geysteen nabadda guud ee dal iyo dibad iyagoo muddooyin badan si wanaagsan oo laga yaabay u soo dhaweeya madaxda DDS iyo kuwa Federaalkaba, haddaba ma is leedahay abaalkooda Xukuumadda DDS way fulisey?
Jawaab:Haa ; waxaan tusaale ahaan u soo qaadan karnaaaa dawlada deegaanka soomlida iyo tan federaalkubu qurbajoota DDS aad iyo aad ayay sharaf , mudanaan,iyo karaamo ,ba ugu hayaan waxaanu na leenahay qurbajoogta wadanka laydinkama xigo waa wadankiinii waxaad qabateena waxaad u qabateen wadankiina iyo ciidiina waadna mahadsantihiin.
XOL: Ugu danbeyn maxaad jeceshay ama fariin ah oo aad gaadhsiineysaa qurba joogta deegaanka ee ku taxan Warbaahinta Xaajo.
Jawaab: Waxaan qurbajoogta gaadhsiin lahaa in ay wadankooda soo maalgashadaan maadaamo uu wadankoodu dihinyahay,qurbajoota aan wali imaanina waxaan ugu baaqayaa in ay yimaadaan oo ay indhahooda ku soo arkaan nabada iyo horumarka.
XOL: Waad mahadsantahay waqtigaaga.
Jawaab: Waad mahadsantihiin bahda xaajo.